Ukubuyisela kwakhona ukufikelela kwi-Android ngokulibala iphasiwedi okanye iphethini | I-Androidsis
Ungayifumana njani kwakhona iselfowuni yakho ye-Android ukuba uyilibele iphethini okanye iphasiwedi
Enye yezinto ezimbi kakhulu ezinokuthi zenzeke kuthi kukuba silibale iphethini, i-PIN okanye iphasiwedi esiyifunayo ukufikelela kwifowuni yethu ye-Android. Ngethamsanqa, sinokusombulula le meko, ukuze sikwazi ukufikelela kwifowuni yethu kwakhona, ngesiqhelo. Kukho iindlela ezininzi, nangona kungekho nkqubo ingenakusilela, kodwa kuhlala kukho into esincedayo kule nkqubo.
Nazi iindlela ezilungileyo esinazo ngoku ube nakho ukufikelela kwifowuni yethu ye-Android kwakhona ukuba kunokwenzeka silibale ipateni, iphasiwedi okanye iPIN yefowuni.
1 Fumana idivaysi yam
4 Inkxaso esemthethweni
Fumana idivaysi yam
Yinkqubo esele siyazi, kuba yeyona nto sinokuyisebenzisa fumana ifowuni yethu elahlekileyo okanye ebiweyo ye-Android kunye nakwi- yitshixe xa kukho ubusela. Kule meko, iya kusinceda ukuba siphinde sikwazi ukufikelela kuyo xa silibala igama lokugqithisa lefowuni yethu ye-Android. Isinika ithuba lokuba yenza iphasiwedi entsha ukufikelela kwakhona kuyo kwaye uyisebenzise kwakhona.
Okokuqala kufuneka singene kwiwebhu, kwesi sixhobo. Singena ngeakhawunti yethu kwaye apho kufuneka sikhethe isixhobo esivaliweyo ngeli xesha. Into elandelayo ekufuneka siyenzile kukucofa isitshixo, Kwaye emva koko iya kusivumela ukuba simisele iphasiwedi entsha, nantoni na esiyifunayo.
Emva koko, siya kuba nakho ukuvula le fowuni ye-Android itshixiwe ngokufaka le-password esiyenzileyo. Nje ukuba singene ngaphakathi, kufuneka khetha inkqubo entsha yokutshixa kuseto lwefowuni.
Kwindawo yesibini sinayo le nkqubo, sisebenzisa isixhobo esinaso ukufumana kwakhona iiphasiwedi kwi-Android. Kule meko, iya kusinceda siphinde sikwazi ukufikelela kwifowuni yethu ye-Android. Kuba amaphasiwedi esiwagcinileyo kwesi sixhobo anokusinceda kule meko, ukuze sikwazi ukufikelela kwifowuni kwakhona. Kwizifundo zayizolo sikubonise amanyathelo.
Sangena esi sixhobo, apho sibhalisa kwiakhawunti yethu kaGoogle kwaye emva koko sinazo zonke iipaswedi ezigcinwe ngelixa sisebenzisa iSmart Lock, ke kunokwenzeka ukuba ibekho ehambelana nale sinayo kwifowuni yethu. Ke siza kuba nakho ukufikelela kwifowuni kwakhona. Ke, xa singaphakathi kwesixhobo, sinokutshintsha iphasiwedi, kwaye sibheje kwezinye iinkqubo, okanye akukho, kususwa isitshixo seSIM.
Enye indlela enokusetyenziswa kwezinye iifowuni ze-Android, ngakumbi iinguqulelo ezindala zenkqubo yokusebenza, kukufumana iphasiwedi usebenzisa i-Gmail. Xa ufaka iphethini ngokuchanekileyo izihlandlo ezihlanu evumela ukuba uvule ifowuni, kuhlala kunokwenzeka ukufumana iphasiwedi usebenzisa i-Gmail. "Uyilibele iphasiwedi" ivela kwiscreen, ekufuneka sicofe kuyo. Iya kusicela ukuba singene nge-imeyile emva koko.
Ngale ndlela, ikhowudi iya kuthunyelwa kwiakhawunti yethu ye-Gmail, enkosi esingavula ngayo ifowuni. Sifaka ikhowudi abasithumelele yona emnxebeni kwaye ke siyifikelele kwakhona. Yindlela elula, esebenza kakuhle ngokubanzi, nangona kufuneka sinedatha okanye i-WiFi isebenze kwifowuni, kuba kungenjalo ayisivumeli ukuba siyisebenzise. Ukuba usebenzisa uhlobo olungelulo lwenkqubo yokusebenza, ngokunokwenzeka unokukhetha olu khetho.
Iimpawu ezininzi zeefowuni ze-Android bahlala benikezela ngenkxaso esemthethweni kubasebenzisi abangenako ukufikelela kwifowuni. Ke umsebenzisi angalusebenzisa olu khetho ukufumana kwakhona isixhobo. Yinkqubo ehlala isebenza kakuhle kwiimeko ezininzi, ke kuhlala kubalulekile ukuyigcina engqondweni, kuba inokusinceda.
Ngokunokwenzeka olona khetho lwaziwayo kukufumana iFowuni yam yakwa-Samsung, inkonzo esinokuthi siye kuyo fikelela kule khonkco. Ukuba sineakhawunti esemthethweni ye-Samsung edityaniswe kwifowuni, siya kuba nakho ukufikelela kuyo kwaye ukusuka apho siqhubeke ukuvula ifowuni. Ke siza kuphinda sikwazi ukufikelela kuyo kwakhona.
Isamsung ayisiyiyo kuphela uphawu oluyixhasayo. IHuawei ikwabonelela abasebenzisi bayo ngephepha lenkxaso, onokuthi wenze njalo ndwendwela kule khonkco. Apho sinethuba lokucela uphawu ukuba luqhubeke nokuvula ifowuni. Ke kamva siya kuba nakho ukutshintsha indlela yokufikelela kuyo. Eyona nto inokwenzeka, uphawu luya kusicela ulwazi oluthile, ukubonisa ukuba singabanikazi abafanelekileyo besixhobo.
U-Sony unenye inkqubo, eyaziwa kakuhle kule meko, eyi-My Xperia, esinokuyenza fikelela kule khonkco. Umbono kukuba xa siyithengile ifowuni, uphawu luye lwaziswa ukuba le modeli yeyethu, ke, xa sibhalisa kule webhusayithi, khuphela inkqubo kwikhompyuter yakho ukuvula ifowuni yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ungayifumana njani kwakhona iselfowuni yakho ye-Android ukuba uyilibele iphethini okanye iphasiwedi
Thatha ithuba lesaphulelo se-11.11 kwiifowuni ze-OUKITEL
Uyintoni umahluko phakathi kokuvala okanye ukulala isicelo kwi-Android